ပြန်ရည်ကြောပိတ်၍ရောင်ခြင်း နှင့် လေ့ကျင့်ခန်း - Hello Sayarwon
ပြန်ရည်ကြောပိတ်၍ရောင်ခြင်း နှင့် လေ့ကျင့်ခန်း
ပြန်ရည်ကြောများ ပိတ်၍ ဖောင်းခြင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်မည်ဆိုပါက သတိထားပြီး စိတ်ချရသည်များကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ အချို့သော လေ့ကျင့်ခန်းများမှာ သေချာတိကျစွာ သုတေသနပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိပါ။ သည်ဆောင်းပါးတွင် ပြန်ရည်ကြောစနစ်နှင့် ၎င်းအတွက် သတိထားပြုလုပ်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများအကြောင်းကို အကျဉ်းချုံး ဖေါ်ပြသွားပါမယ်။
ထို့ပြင် သင့်ရဲ့ ပြန်ရည်ကြောများ ပိတ်၍ ဖောင်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ အနည်း၊အများပေါ်မူတည်ပြီး သတိပေးချက်များကို လည်း ဆရာဝန်များက ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် သေချာဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ပြန်ရည်ကြောများသည် ခန္ဓါကိုယ် အနှံ့အပြားတွင်ရှိပါတယ်။ လက်မောင်းရှိ ပြန်ရည်ကြောများသည် ပြန်ရည်ကို ချိုင်းအောက်ရှိ ပိုကြီးသော ပြန်ရည်ကြောများသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင် ပင်မသွေးကြောစနစ်ထဲသို့ စီးဝင်သွားကြပါတယ်။ ခွဲစိပ်မှု သို့မဟုတ် ဓါတ်ရောင်ခြည် ကြောင့် ချိုင်းအောက်ရှိ ပြန်ရည်ကြောများနည်းသွားသည့်အခါ ဆက်မစီးနိုင်တော့ဘဲ ထိုချိုင်းတစ်ဝိုက်တွင်သာ ပြန်ရည်များ စုပုံလာပါတယ်။ လက်မောင်းနှင့် လက်တို့တွင် အဖြစ်များပြီး ခန္ဓါကိုယ်ပိုင်းတွင် အဖြစ်နည်းပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းက ပြန်ရည်ကြောများ ပိတ်၍ ဖောင်းခြင်း ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ။
လေ့ကျင့်ခန်းများသည် ပြန်ရည်ကြောများ ပိတ်၍ ဖောင်းခြင်း အတွက် ကောင်းကျိုးရော၊ ဆိုးကျိုးများပါ ရှိပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အေရိုးဘစ်(နှလုံးအဓိကအလုပ်လုပ်စေသော) လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ခွန်အားလေ့ကျင့်ခြင်း၊ ကွေးခြင်း/ဆန့်ခြင်းကို လေ့ကျင့်ခြင်းများသည် ပိုကောင်းပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါက ကြွက်သားများက နို့ညှစ်သကဲ့သို့ ကျုံ့လိုက်၊ နားလိုက် အလုပ်လုပ်သဖြင့် ပြန်ရည်များကို ပါထိုလှုပ်၇ှားမှုနှင့် အတူရွေ့သွားစေပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် ကယ်လိုရီများလောင်ကျွမ်းကာ ပိုနေသော ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါတယ်။ အဝလွန်ပါက ပြန်ရည်ကြောများ ပိတ်၍ ဖောင်းခြင်း ကို ဖြစ်နိုင်ချေပိုများစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းက ပျက်စီးသွားသော ဆဲလ်များကို ပြန်မရစေသော်လည်း နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် ပြင်းထန်သော လေ့ကျင့်ခန်းများသည် သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်ပြန်ရည် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှုန်းကို ပိုမြန်စေပြီး ကျန်သော
ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်ထံမှ အကူအညီ ရယူခြင်းသည် သင့်တွက် အသင့်တော်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ပြန်ရည်ကြောများ ပိတ်၍ ဖောင်းခြင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ ကောင်းကျိုးကိုပိုများစေရန် ပထမဆုံး လက်မှတ်ရ ဆရာဝန်၊ ကုသပေးသူ၊ သူနာပြု စသည်တို့ရဲ့ လမ်းညွှန်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်လျှင် ဆိုးကျိုးများကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
ထို့နောက် ခန္ဓါကိုပုံစံနဲ့ ကျန်းမာရေးပေါ် မူတည်ပြီး သင့်တော်သော လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှသာ မလိုအပ်သော နာကျင်ထိခိုက်မှုများကို ရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ပြင်အစပိုင်းတွင် လေ့ကျင့်ခန်းကို အနည်းငယ် မှစလုပ်ကာ တစ်ပိုင်းနှင့် တစ်ပိုင်းကြား နားပြီးပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ထို့ပြင် ခန္ဓါကိုယ်အောက်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းများကို လျစ်လျူမရှုသင့်ပါဘူး။ ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများကလည်း ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။
သို့သော် လေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းက ခန္ဓါကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးချည်းသာ ဖြစ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ခြင်းက လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြန်ရည်ကြောများ ပိတ်၍ ဖောင်းခြင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းကုသပေးသူရှာရသည်မှာ သင့်အတွက် ငွေရေးကြေးရေးခက်ခဲပါက တခြားသော တတ်ကျွမ်းနားလည်သော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကို ရှာကြည့်သင့်ပါတယ်။
Lymphedema and Exercise. http://www.breastcancer.org/treatment/lymphedema/exercise. Accessed August 20, 2016.